Tshintshela XRP Ukuze US dollar
Ehlaziyiweyo 21/09/2020 06:17
XRP Ukuze US dollar ukuguqulwa. Intengo ye- XRP kwi- US dollar namhlanje kwiimakethe zokutshintshela i-imali yedatha.
10 XRP = 2.39 US dollar
Iqondo lokutshintshiselana nge-imali yedatha inexabiso eliphakathi ngosuku. Ulwazi malunga nokutshintshiselana nge-imali yedatha enikezwe kwimithombo evulekile. Ulwazi lwexabiso le-imali yedatha ehlaziyiweyo. Ukuba unayo 10 XRP, ke ngaphakathi le British Virgin Islands ungayithenga US dollar. XRP lihla izolo. I XRP yehlile ngokuchaseneyo US dollar ngu -423 amakhulu ngamakhulu eepesenti.
Imali yokutshintsha XRP Ukuze US dollar
Kwinyanga edlulileyo, XRP inokuthengiselwa 0.28 US dollar. Kunyaka ophelileyo, XRP ziya kutshintshiselana 0.24 US dollar. Kwiminyaka emithathu edlulileyo, XRP inokuthengiselwa 0.17 US dollar. Kwiveki yonke, XRP ukuya US dollar inqanaba lotshintshiselwano litshintshwe ngu 0.1%. Utshintsho lwexabiso lotshintshiselwano lwe XRP ukuya US dollar inyanga yona -13.61%. Utshintsho lwexabiso lotshintshiselwano lwe XRP ukuya US dollar unyaka ke -0.51%.
XRP (XRP) Ukuze US dollar (USD) itshati ephilayo ekhoyo
Eyona nto ihamba phambili XRP US dollar
Eyona ndlela ihamba phambili XRP yokutshintshanisa namhlanje ukusuka kuyo yonke iimakethe ze-imali yedatha. Indawo efanelekileyo yokuthengisa ukuthenga okanye ukuthengisa XRP namhlanje.
EN XRP/USDF $ 0.25 $ 164 955 -
Eyona nto ihamba phambili XRP US dollar kuzo zonke iimarike zehlabathi
Guqula idijithali XRP US dollar
10 XRP 2.39 US dollar
50 XRP 11.97 US dollar
100 XRP 23.93 US dollar
250 XRP 59.83 US dollar
500 XRP 119.66 US dollar
1 000 XRP 239.32 US dollar
2 500 XRP 598.31 US dollar
5 000 XRP 1 196.61 US dollar
Ukuba unayo 2.39 US dollar, ke ngaphakathi le British Virgin Islands banokutshintshiselana 10 XRP. Ukuguqula 25 XRP, 5.98 US dollar ziyafuneka. Ungatshintshiselana 11.97 US dollar ye 50 XRP. Namhlanje, 100 XRP ingathengiswa 23.93 US dollar. Namhlanje, unokuguqula 250 XRP ye 59.83 US dollar. Ukuba unayo 119.66 US dollar, ke ngaphakathi le British Virgin Islands banokutshintshiselana 500 XRP.
XRP (XRP) Ukuze US dollar (USD) Imali yokutshintsha
Tshintshela XRP/USD namhlanje 21 EyoMsintsi 2020
19/09/2020 0.25 -0.001873 ↓
18/09/2020 0.25 -0.005344 ↓
17/09/2020 0.26 0.017929 ↑
16/09/2020 0.24 -
Namhlanje 500 XRP = 0.249961 USD. 19 EyoMsintsi 2020, 1 XRP iindleko 0.2498 US dollar. 18 EyoMsintsi 2020, 1 XRP iindleko 0.251673 US dollar. Elona liphezulu XRP / USD umyinge kwinyanga ephelileyo 17/09/2020. Ubuncinci XRP ukuya US dollar izinga lokutshintsha kwemali ngaphakathi yayivuliwe 16/09/2020.
XRP (XRP) Ukuze US dollar (USD) ishadi lomlando wexabiso
XRP kwaye US dollar
XRP ikhowudi ye imali yedatha XRP. XRP ishishini lokuqala kwi-marketpresscurrency market 03/12/2019.